I-Jab yase-Russia ijoyina umjaho wemithi yokugomela i-Covid-19 | Scrolla Izindaba
I-Jab yase-Russia ijoyina umjaho wemithi yokugomela i-Covid-19
Umuthi wase-Russia wokugomela i-Covid – i-Sputnik V – uthola udumo lokuba wumuthi wokugoma ohamba phambili.
Kungekudala izokwamukelwa kuzo zonke izinxenye zase-European Union ngemuva kokuthi i-Russia isayine isivumelwano ne-Italy ukukhiqiza umuthi wayo wokugoma i-Sputnik V.
Lokhu kuza ngemuva kwenyanga i-African Union imemezele ukuthi ithole imithamo eyizigidi ezingama-300 yomuthi wokugoma.
Kulindeleke ukuthi kukhiqizwe imithamo eyizigidi eziyishumi yomuthi wokugoma e-Italy kusukela ngoNtulikazi kuze kube sekupheleni konyaka ngemuva kwesivumelwano sokuthenga phakathi kuka-Adienne, inkampani yemithi yase-Italy ne-Switzerland kanye ne-Russia Direct Investment Fund.
UThomas Mertens, inhloko yeziphathimandla zokulawula zase-Jalimane, uncome obala i-Sputnik V jab ngoLwesithathu, wayichaza njengomuthi wokugoma omuhle okungenzeka ukuthi nawo uzovunyelwa e-EU ngesikhathi esithile.
I-Russia phambilini yayithole ukugxekwa yi-Europe ngokuvumela i-Sputnik V ukuthi isetshenziswe kabanzi ngemuva kwezinyanga ezingaphansi kwezimbili zokuhlolwa kwabantu.
Kodwa-ke, uMertens utshele i-Rheinische Post ukuthi ososayensi base-Russia banolwazi ngemithi yokugoma.
“I-Sputnik V inokwakhiwa okuhlakaniphe kakhulu,” esho.
Ucwaningo olushicilelwe ngoNhlolanja lwathola ukuthi umuthi wokugoma uphephile nokuthi unikela ngokuvikela okungaba ngama-92% ku-Covid-19.
I-Russian Federation ithe okunye ukulethwa kungaqala ngoNhlaba kepha okuningi kuzoqala ngoNhlangulana.
Esitatimendeni sangoNhlolanja, uJohn Nkengasong, umqondisi wenhlangano elawula izifo i-AU, uthe
“Siyaziqhenya ngokukwazi ukuhlinzeka [ngemithi yokugoma i-Sputnik V] emazweni ethu angamaLungu e-AU”.
Uhulumeni waseNingizimu Afrika namanje akanaso isiqiniseko sokuthi umuthi uyasebenza yini uma kuqhathaniswa nokwehlukahluka okuvelele eNingizimu Afrika.
UMnyango wezeMpilo eNingizimu Afrika uthe abenzi be-Sputnik V bahambise amaphepha kumlawuli wemithi wendawo ukuze abhaliswe.
Umthombo wesithombe: @rababalouii